आफ्नो गुप्तांगबारे यी कुरा पुरुषलाई भन्न चाहन्छन् महिलाहरु ! - AJAMBARI
३ असार,२०७५ 320 0
अचेल युवती-महिलाहरु हरेक कुरामा पुरुषजतिकै सक्षम छन् । आफूलाई कुनै कुरामा पछाडी परेको मान्दैनन् । आफ्नो कुरा राख्न हिचकिचाउँदैनन् । अब कुरा आयो आफ्नो पार्टनरको । पार्टनरका अगाडि आजकालका महिला झनै फ्रेङक हुन्छन् भने केही कुरामा त शायद हामी भन्न सक्छौ कि महिलाहरु यो विषयमा पुरुषसँग बताउनमा अप्ठेरो मान्छन् । तर, हालै भएको एक सर्वेक्षणमा महिलाहरु आफ्नो गुप्त अंगबारे पुरुषलाई केही कुरा बताउन चाहन्छन् भन्ने पत्ता लागेको छ ।
तपाई पनि जान्नुस् महिलाका गुप्तांगबारे ८ कुरा, जो उनीहरु भन्न चाहन्छन्ः
एक महिलाले सर्वेक्षणका क्रममा बताइन् कि अधिकांश पुरुषहरुलाई थाहा हुँदैनकी महिलालाई कहाँ छुँदा उत्तेजना हुन्छ । महिलाहरु भन्छन् कि हामी यो सबै कुरा पुरुषलाई बताउन चाहन्छौं तर, उनीहरुको अगाडि केही पनि बोल्ने हिम्मत हुँदैन् ।
७. पुरुषसँग गर्न चाहन्छन् यस्तो:
महिलाहरुले बताए कि उनीहरु पुरुषहरुसँग यस्तो गर्न चाहन्छन् जो पुरुषहरु उनीसँग गर्छन् । हाम्रो पीडालाई भुलेर मात्र आफ्नो चाहना पूरा गर्छन् । हामीलाई कति समस्या हुन्छ तर, हामी उनका सामुन्ने केही भन्न सक्दैनौं ।-एजेन्सी
६ फाल्गुन,२०७४0559
४ जेठ,२०७५0352